Amazon wepụrụ AMD na Intel na Graviton3 Processor siri ike dabere na ogwe aka - 【 Comparison】 2022
Amazon na-ewere AMD na Intel nwere ihe nrụpụta Graviton3 dị ike dabere na Arm
Amazon.com Onyinye Ego - E-mail - Akara Amazon - Navy Blue
Enwere ike ịgbapụta akwụkwọ ikike onyinye Amazon maka nde ngwaahịa na amazon.es; Hazie kaadị onyinye gị dabere na mmemme ma ọ bụ mmasị nke onye nnata
Ọrụ Weebụ Amazon kwupụtara ọkwa ọhụrụ maka EC2 n'ụdị C7g.
Ekwuputara na ụlọ ọrụ AWS re: Emepụta ihe omume, a ga-akwado usoro ọhụrụ ya site na onye nrụpụta ọhụrụ ya, Graviton3, nke na-elekwasị anya ihe AWS na-akpọ ibu ọrụ dị egwu: HPC, nhazi batch, automation electronic design (EDA). , nkà mmụta sayensị modeling, mgbasa ozi mgbasa ozi, ekesa analytics, na processor dabeere na igwe mmụta mmụta.
Ya mere, atụla anya na ha ga-egosi na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ omenala, n'agbanyeghị na enwere ike iji ha maka nnabata zuru oke ma ọ bụ ihe nkesa raara onwe ya nye / ụdị VPS.
Ekwuwapụtara Graviton2 na Disemba 2019 na ewepụtaghị ya ruo June nke afọ gara aga, ebe egosipụtara mbụ Graviton dabere na Arm na re: Invent 2018.
Akụkọ a na-apụta
Graviton3: Gịnị ka anyị maara?
Ọ dị mma, AWS na-ekwu na mbipụta ọhụrụ ahụ dị 25% ngwa ngwa karịa Graviton2, yana arụmọrụ ebe na-ese n'elu mmiri ugboro abụọ yana nkwalite atọ maka ịrụ ọrụ mmụta igwe. Oriri ike ga-adị 60% ala, ọ bụ ezie na a maghị ọtụtụ ihe gbasara nhazi nhazi.
Ha ga-agba ọsọ na ebe nchekwa DDR5 nke kwesịrị inye mmụba 50% na bandwidth ebe nchekwa. Anyị amaghị ọnụọgụ cores, ihe eji arụ ọrụ, ma ọ bụ ọsọ elekere isi.
Graviton2 ji okpukpu abụọ nke cores sitere na ụdị 2018 mbụ gaa na cores 64 wee jiri ARM Neoverse N1 architecture, usoro nrụpụta 7nm, nke were ya na 2.5 GHz.
Graviton3 ga-eche asọmpi ọhụrụ sitere na AMD na Intel ihu. A na-atụ anya na nke mbụ ga-ewebata ngwaahịa Zen 4 na 2022 na ndị nrụpụta na-eji ihe ruru 128 cores na usoro 5nm. Intel ekpugherela ihe nrụpụta Xeon "Sapphire Rapids" nke na-ebute DDR5 na PCIe 5.0 na tebụl.